सस्तो एल्युमिनियम फेंसिंग -- fscyal.com
एल्युमिनियम रेलिंग / वेल्डिंगको साथ बार. यो भair्या rail रेलिंग र बालकनी रेलिंगको लागि विशेष हो. एल्युमिनियम मिश्र रेलिंगलाई चित्रित र मर्मत गर्न आवश्यक पर्दैन. यो पुरानो र नयाँ छ, जसले तपाईलाई थकान बचाउँछ ...
गिलासको साथ एल्युमिनियम बार ग्लास अब बाल्कनी रेलिंगका लागि घरको सामान्य बार हो. हाल, बाल्कनी प्रकारका लागि गिलास बाड़ प्रायः टेम्पर्ड गिलासबाट बनेका हुन्छन्. टेम्पर्ड ग्लास सुरक्षा गिलास हो. टेम्पर्ड ग्लास वास्तवमा एक प्रकारको प्रेस्ट्रेस्ड ग्लास हो. क्रमशः को सुधार गर्न को लागी ...
वेल्डिंग बिना एल्युमिनियम बाड़ अनुसन्धान पठाउनुहोस् वा मलाई आवश्यकताहरू बताउन हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस्, हामी यसलाई तपाईंको लागि अनुकूलित गर्नेछौं. Changyuan एल्युमिनियम मिश्र रेलिंग / बाड़ बाट बनेको छ 6063 औद्योगिक एल्युमिनियम. यो निकासी द्वारा बनाईएको छ, बुढेसकाल, सोल्डरिंग, र उच्च-तापमान इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेइ।. एल्युमिनियम मिश्र रेलवाले गर्दैन ...